युगसम्बाद साप्ताहिक - पार्टीभित्र संसदमा जस्तै बहुमतले अल्पमतलाई पेल्न खोज्यो
Friday, 11.16.2018, 02:47am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 03.31.2015, 10:56am (GMT+5.5)
- घनश्याम भूसाल, उप–महासचिव, नेकपा एमाले
० एमाले कसरी विवादमा फस्यो ?
० माधवकुमार नेपालले भनेजस्तो केपी ओलीको भूमिका पार्टीभित्र पनि बहुमतको बलमा पेल्ने गरी आएको हो ?
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा ठ्याक्कै भनिहाल्ने स्थिति त आइसकेको छैन तर आउन लागेको चाहिं हो । म यी कुरालाई लुकाउन चाहन्न । संसद्मा जस्तै पार्टीभित्र पनि बहुमतले पेल्ने खालको त्यस्तो दुष्प्रयास भएका हुन् तर हामी त्यस्तो मूल्य र मान्यता विपरीतको प्रयोगलाई पार्टीभित्र अभ्यास गर्न दिंदैनौं ।
० तर तपाईंकै वरिष्ठ नेताले त नामै लिएर पार्टी अध्यक्षकै गलत भूमिकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति जुट्न नसकेको र पार्टीभित्र पनि उस्तै गरी आएको टिप्पणी गर्नुभयो नि ?
हामीले पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका लागि अधिकतम लचिलो हुने निर्णय गरेका छौं र त्यो नै पार्टीको औपचारिक निर्णय हो । हाम्रो जोड पनि यसैमा हो । उता पार्टी बाहिर अन्य दलहरूसँगको सम्बन्धमा अन्यथा सोच्ने हो भने पनि पार्टीभित्र एक ढिक्का नभई त्यस्तो सोच्न सकिंदैन । तर हामी अहिले हरेक विषयमा एक ढिक्का हुन सकिरहेका छैनौं । हामी अझै पनि नवौं महाधिवेशनमा अल्झिएको गुटबन्दी राजनीतिबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं । त्यसरी हेर्दा एमालेभित्र देखा परेको जुन शक्ति प्रदर्शनको अभ्यास छ, त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति जुटाउन नदिन पनि भयो भन्ने लाग्दैछ ।
० महाधिवेशनसँगै नयाँ नेतृत्व आयो, तर नेतृत्वले नै गुटको बीउ रोपेर त्यसमा मलजल गर्दैछ, एमाले पार्टी अब कता जाँदैछ ?
महाधिवेशनपछि हामीमा सांगठनिक रुपमा जुन कचिंगल रह्यो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । यहाँभित्र अहिलेसम्म एउटा पेलेर जाने प्रवृत्ति देखा परेको छ । पार्टीभित्र सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान पनि गर्दै ल्याएका छौं । जस्तै स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो समितिको गठन, यो निकै महत्वपूर्ण थियो, त्यसलाई हामीले समाधान गरेर आयौं । अहिले त्यस्तै महत्वपूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूको सांगठनिक कार्य विभाजन हो, त्यसमा पनि त्यही महाधिवेशनको प्रभावहरू देखा परे, हामीले त्यसको विरोध गरेर सही रुपमा समाधान गर्न दबाब दिएका थियौं । अन्ततः हाम्रो प्रयास सफल भएको छ । समानताका आधारमा हामीले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्न सफल भएका छौं ।
० नेपालको मूल राजनीति र एमालेभित्रको राजनीति एउटै समस्यामा अल्झिएको छ, बहुमत कि सहमतीय प्रक्रिया, तपाईंको पार्टी अध्यक्षको भूमिका किन यस्तो रह्यो ?
हामीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेका छौं, समावेशितालाई समावेश गरेका छौं, र कतिपय धार्मिक, एकलकाँटे संरचनालाई वैधानिक रुपमा संस्थागत गरेका छौं । अब हामीले संस्थागत गर्न बाँकी रहेको संघीयताको स्वरुप हो । म यस विषयमा के ठान्छु भने हामी वामपन्थीहरूका अगाडि यी मुद्दालाई भोलि निर्माण गर्ने वामपन्थी एकीकृत पार्टी, वामपन्थी राज्य र नयाँ आन्दोलनको पक्षमा कुन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हिसाबले छलफल गरियो भने सजिलो हुन्थ्यो । यसरी छलफलमा जाने हो भने हामीबीच सहमति धेरै टाढा थिएन । यतातिर हामीले छलफल नै गरेनौं । यी कुराहरू एमाओवादीका साथीहरूसँग गर्दा उहाँहरूलाई अलि बढी संवेदनशील चाहिं पाउँछु, तर हाम्रा केही तात्कालिक मुद्दाहरूमा देखिएको विवादले हाम्रो मूल उद्देश्यलाई प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
० यी सबै काम गर्न तपाईंको नेतृत्व जिम्मेवार भएर लागेको छ त ?
मैले अघि पनि भनें एमाले महाधिवेशनमा निकै नराम्रोसँग गुटबन्दी राजनीतिमा फस्यो र अहिलेसम्म त्यहाँबाट निस्कन सकेको छैन । मूल नेतृत्व समेत त्यहींभित्र हराइरहेको छ । हाम्रा अगाडि जस्ता जिम्मेवारी आएका छन्, त्यो भूमिका देखाउन हाम्रो नेतृत्व चुकेको छ । त्यसको दोष मेरो पनि होला तर अध्यक्ष र महासचिव मूल नेतृत्व हुनुका कारणले उहाँहरू बढी दोषी हुनुहुन्छ ।
० तपाईं वैचारिक छलफल रुचाउने नेता, एमाले पार्टीमा आएको अहिलेको नेतृत्वमा अध्ययन कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
अहिले आम रुपमा विचार सिद्धान्तमा भन्दा पार्टीका केही स्वार्थ, गुटको स्वार्थ र नेताको स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । यो एमालेभित्र मात्र होइन, अरु पार्टीभित्र पनि त्यस्तै देख्छु । विचार, सिद्धान्त र वर्गीय राजनीतिको एउटा नेता, गुटको ओझेलमा पर्दै गएको छ । एमालेभित्र पनि यस्तै छ । तर यस्तो गलत विचारको विरुद्धमा जबर्जस्त आवाज पनि उठिरहेको छ । तर बलियो भएर आउन सकेको छैन । र पनि एक दिन हरेक पार्टीमा विचार, सिद्धान्तका आधारमा राजनीति गर्नेहरूको अवस्था बलियो हुन्छ भन्नेमा म निकै आशावादी छु ।
० संस्थापनले गुटका आधारमा सबैतिर पेलेर जान लाग्यो भन्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष छ, अब तपाईंहरू त्यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ ?
एमालेको इतिहास, परम्परा, विधि र आवश्यकता हेर्दा कसैले कसैलाई पेलेरै जाने अवस्था छैन । यदि लिडरसिपले पेलेरै जान लाग्यो भने म यसलाई असाध्यै राजनीतिक रुपमा हेर्छु । यो सांगठनिक हिसाबले प्रतिक्रिया दिने खालको मात्र हुँदैन । यसको अर्थ अर्काे समानान्तर कमिटी बनाएर जानुपर्छ भन्ने पनि होइन । हाम्रो इतिहासलाई हेर्दा समानान्तर संगठन चलाउने, तोडफोड, गुण्डागर्दी गर्ने र नेतृत्वलाई धम्क्याएर आफ्नो अवस्था बलियो बनाइराख्ने काम हामीले कहिल्यै गरेनौं । यो हाम्रो काम पनि होइन । केही साथीहरूले हिजो यस्तो गर्नुभयो, तर हामी त्यस्तो गर्दै गर्दैनौं । तर पार्टीको तल्लोस्तरसम्म लैजान्छौं र आफ्ना विचार राख्छौं ।
० यी सबै विवाद मिलाउन पार्टी अध्यक्षको भूमिका कस्तो छ ?
मैले स्थायी समिति बैठकमा पनि प्रष्ट राखेको छु, विभिन्न नियुक्तिका कुरा छ, युवा संघको विवाद छ, यस्तै सरकार सञ्चालनको विषयमा विवाद छ । यसको प्रभावहरू तलसम्म परेका छन् । यो सबै कुरालाई मैले सांगठनिक रुपले मात्र देख्दिनँ । यी कुराहरूमा अध्यक्षको भूमिका सकारात्मक छैन । म त्यही पार्टीको जिम्मेवार नेता भएर धेरै भन्न पनि मिल्दैन । म पार्टी अध्यक्षको पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी भूमिकामा सन्तुष्ट छैन । उहाँको कार्यशैली न्यायोचित र समग्र एमाले पार्टीको हितमा छैन । यही बाटो हिंड्यौं भने हामीले पार्टीलाई उँभो लगाउन सक्दैनौं, पार्टी सुरक्षित राख्न सक्दैनौं भन्ने मेरो प्रष्ट बुझाइ हो ।
० पार्टी बैठक पनि अध्यक्ष निवासमै सीमित भयो नि ?
यो राम्रो काम भइरहेको छैन । पार्टी अध्यक्ष बिरामी भएका कारण भनिएको छ । बोल्दा पनि मानवीय संवेदना जोडिएको कुरा छ । तर हामीले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छैनौं । पार्टी सार्वजनिक राजनीतिक जीवनको कुरा हो । व्यक्तिको समस्या र पार्टी जीवनको कुरालाई एकै ठाउँमा घोलमेल पारेर बुझ्यौं भने हामी अप्ठेरोमा पर्छौं । तर अहिले यस विषयमा धेरै बोल्ने ठाउँ छैन ।